September 30, 2020 - Amawpyay
ဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေရတာလဲ ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းပျောက်နေပီလား?
ဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေရတာလဲ ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းပျောက်နေပီလား? အသက်ရှင်နေရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာမှန်း မသိတော့ တဲ့အခါ၊ ဖြစ်ချင်လှ ပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ အိမ်မက်တွေ ဝေဝါးလာ တဲ့အခါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုး မရှိတော့သလို ခံစားလာရတတ် ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘဝမှာ လမ်းပျောက်ခြင်းရဲ့ အစပါပဲ။ အမြင့်ကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီး အားငယ်နေ မိတယ်။ ပန်းတိုင်ကို ရှေးရှုလှော်ခတ်နေတဲ့သူတွေကို ငေးပြီး သိမ်ငယ်နေမိတယ်။ လူတိုင်း လူတိုင်း ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အခိုက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကရော ဘာလဲဆိုတာကို အဖြေရှာရင်း..ပျောက်ဆုံးရင်း အဓိပ္ပာယ်မဲ့နေမိတော့တယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုးကို သင်တစ်ယောက်တည်း ကြုံဖူးတယ်လို့ ထင်နေရင်တော့ တော်တော်မှားယွင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို လမ်းပျောက်ခြင်းမျိုးဟာ ထိပ်တန်းအဆင့် အောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်း ကြုံဖူးတယ်။ …
ဆီးချိုဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးမယ့်အပြင် လူသိနည်းတဲ့ ပဲစောင်းလျားသီးရဲ့ အံ့ဖွယ် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ
ဆီးချိုဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးမယ့်အပြင် လူသိနည်းတဲ့ ပဲစောင်းလျားသီးရဲ့ အံ့ဖွယ် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပဲစောင်းလျားသီးကို စားဖူးလားရှင့်။ စာရေးသူကတော့ တောင်ပေါ်ဒေသမှာ နေခဲ့တော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းစားပါတယ်။ အရသာ လည်းရှိတယ်။ ပဲစောင်းလျားသီးဟာ အရသာရှိပြီး အာဟာရဓါတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တစ်မျိုးပါပဲ။ ပဲစောင်းလျားသီးရဲ့ အရွက်၊ အမြစ်၊ အသီး၊ အပွင့်အားလုံးကို စားလို့ရပါတယ်။ ပဲစောင်းလျားသီးရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း Antioxidant တွေကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ ပဲစောင်းလျားသီးဟာ အိုမင်း ရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေတယ် ခေါင်းနှစ်ဖက်လုံးကိုက်တာ ခေါင်းတခြမ်းထဲ ကိုက်တာတွေက လူတိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုပါပဲ။ ပဲစောင်းလျားသီးဟာ …
ရေနွေးအဖြူထည်ကို သောက်သုံးပေးရင် ရလာမယ့် အံ့မခန်း အကျိုျးေကျးဇူးတွေကတော့ ဒီမှာပါ
ရေနွေးအဖြူထည်ကို သောက်သုံးပေးရင် ရလာမယ့် အံ့မခန်း အကျိုျးေကျးဇူးတွေကတော့ ဒီမှာပါ လူတော်တော် များများဟာ ရေအေး ဒါမှမဟုတ် ရေခဲရေကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်သုံး တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေနွေးဖြူမှာ သင်မသိတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အလှအပ ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ကဲ ရေနွေးဖြူသောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။ ခုကစပြီး ရေနွေးများများ သောက်သုံးပေးကြပါလို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ( ၁ ) အဆီကျ သွယ်လျစေမယ် ရေနွေးဟာ အစာချေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ဝမ်းမှန်စေပါတယ် ။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဝိတ်ကျချင် နေတဲ့သူ၊ ပိန်ချင်တဲ့သူ တစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ အစာ …